Aqriso:- Laba qodob ee isku soo dhaweeyay aragtida siyaasiyiinta soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 27 January 2019
Garowe (mareeg news) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda maamul goboleedyada iyo madax kale ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
Shirka ayaa waxaa ku qeyb galay madaxda maamul goboleedyada dalka, madaxweynayaashii hore ee dalka, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo ku xigeenadiisa, madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa iyo madaxda dowladda Soomaaliya.
Warar ku dhow dhow kulanka oo ay heshay Caasimada Online, ayaa sheegay in kaftan iyo kala war qaadasho kaddib xubnaha kulanka ay isku afgarteen labo qodob oo ay ka mid yihiin in la xaliyo khilaafka dowladda iyo madax goboleedyada, iyo in shir labada dhinac isugu yimaadaan magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu soo iclaamiyo xilliga la qabanayo shirkaas.
Kulankan ayaa ahaa kii u horeeyay ee fool ka fool ah ee dhex mara Madaxweyne Farmaajo, Madaxda maamul goboleedyada iyo Madaxdii hore, iyadoo muddooyinkan ay jireen khilaaf u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada oo dhinac ah, iyo qaar ka mid ah Madaxdii hore oo iyagana dhaliilsanaa qaabka dowladdu wax u wado.